Ọktọba 2021 - Blog Blog
Ọnwa: October 2021
Ụdị ntutu dị mfe maka ntutu dị ọkara na ụdị ntutu dị iche iche nke ụmụ nwanyị
By Na -agba egwu October 29, 2021 si ebi ndụ 0 Comments
- Ụdị ntutu dị mfe maka ntutu dị ọkara - Ụmụ nwanyị nwere ọtụtụ ntutu isi na ụdị ị ga-esi na ya pụta - ohere ndị a fọrọ nke nta ka ọ bụrụ enweghị njedebe! Ọ bụ ya mere ịhọrọ ntutu isi dị mma nwere ike bụrụ ihe na-enye afọ ojuju. Obi ụtọ ịchọta na anyị ...
Ụdị ntutu isi maka obere ntutu ma ọ bụ ogologo ntutu isi na ụdị ntutu dị iche iche nke ụmụ nwanyị
By Victoria Akpan TMLT October 29, 2021 si ebi ndụ 0 Comments
- Ụdị ntutu maka ntutu dị mkpụmkpụ - Ụdị edozi isi maka ụdị ntutu dị iche iche na-ewu ewu ugbu a na ụlọ ọrụ ejiji na ịma mma! Ha nwere ike ịbụ ntakịrị feisty, ntakịrị sexy, ntakịrị ụtọ, ma ọ bụ ntakịrị nkecha! Nke a bụ...
Ahịa ekeresimesi kacha mma na Europe, ebe ha na ihe ha ga-eme ebe ahụ
By Victoria Akpan TMLT October 29, 2021 Family, si ebi ndụ, Travel 0 Comments
– Kachasị mma ahịa ekeresimesi na Europe – Iwebata ahịa ekeresimesi na-egosi mmalite nke oge ezumike na Europe dum. Ahịa ndị a na-enye otu ụdị ahụmahụ nke ekwenyere na ọ ga-etinye gị n'ọnọdụ ezumike. Ma ọ bụ mulled ọkụ ...
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ kacha mma na Caribbean maka ntụrụndụ na ntụrụndụ dị ịtụnanya
By Na -agba egwu October 26, 2021 Travel 0 Comments
- Ụlọ oriri na ọṅụṅụ kacha mma na Caribbean - Caribbean bụ otu n'ime ebe ndị a ma ama na ụwa maka ndị na-achọ ebe okpomọkụ. Na mkpokọta agwaetiti a magburu onwe ya bụ ebe ọtụtụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ nwere kpakpando ise. Dabere na...
Ebe ị ga-aga maka ezumike afọ ọhụrụ gburugburu ụwa maka ntụrụndụ dị ịtụnanya
By Victoria Akpan TMLT October 26, 2021 Family, si ebi ndụ, Travel 0 Comments
- Ebe ị ga-aga maka Afọ Ọhụrụ - Ememe Afọ Ọhụrụ, site na mgbede ruo ụbọchị d-ụbọchị bụ oriri kachasị ukwuu nke afọ. Ọ bụ ọgbakọ ndị mmadụ na-agbakọta ọnụ iji mee mmemme nke afọ ọhụrụ na-enye....
Ụlọ nkwari akụ kacha mma maka ụmụaka na Las Vegas Maka ntụrụndụ na ntụrụndụ dị ịtụnanya
By Na -agba egwu October 25, 2021 Travel 0 Comments
- Ụlọ oriri na ọṅụṅụ kacha mma maka ụmụaka - Ma ịchọrọ ka ụlọ oriri na ọṅụṅụ gị nwee ọtụtụ oghere maka ụmụaka na-agba ọsọ na gburugburu ebe obibi ma ọ bụ nke kachasị elu, ụlọ ọrụ ndị a na-akwado maka ịzụ ụmụaka ka ha na-enye ndị nne na nna ọtụtụ ...
Sneakers kacha mma maka ụmụ nwoke maka oge dị iche iche yana akpụkpọ ụkwụ ụmụ nwoke 15 kacha elu
By Victoria Akpan TMLT October 25, 2021 si ebi ndụ, ngwaahịa, Ịzụ ahịa 0 Comments
- Sneakers kacha mma maka ụmụ nwoke - Na-enweghị mkpa ajụjụ, ndị na-agba chaa chaa, ma ndị nwoke ma ndị nwanyị bụ ụdị akpụkpọ ụkwụ kachasị ewu ewu n'ụwa. Sneakers bụ ngwakọta zuru oke nke nkasi obi, ụdị, na ịba uru, yana ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ...
Uwe mgbatị ahụ kacha mma maka ụmụ nwoke na ụdị akwa akwa ọrụ kacha mma
By Na -agba egwu October 23, 2021 si ebi ndụ 0 Comments
- Uwe mgbatị ahụ kacha mma maka ụmụ nwoke - Ịchọta uwe mgbatị ahụ bara uru ma bụrụ nke ejiji bụbu ọrụ siri ike. Ọ bụ ezie na t-shirts buru ibu na akwa ịcha akwa merela ochie bụ ụkpụrụ, taa ọ bụ maka ịkpakọ arụmọrụ na ịke. Ma...
- Albums kacha mma - Ọ bụrụ na ị bụ onye hụrụ hip hop n'anya, mgbe ahụ ị nwere ike nwee mmasị ịlaghachi n'oge wee mara ọba kacha mma nke oge niile. Agbanyeghị na azịza ya nwere ike gbagwojuru anya na nkeonwe, ...
By Na -agba egwu October 22, 2021 Health 0 Comments
- Nchacha ihu kacha mma maka ụmụ nwoke - Nke mbụ na ikekwe ihe kachasị mkpa na usoro nlekọta anụ ahụ bụ nsacha. Ọ na -eme akpụkpọ ahụ gị ka ọ banye na ngwa ndị na -arụ ọrụ n'ime mmemme gị ndị ọzọ. Enwere otutu ihu ...